Scribble 🥇 Gali oo Ku raaxayso emulator.online
dhadheer . Horumarinta ereybixinta luuqad kasta waa shaqo u baahan u heellan. Kawaran haddii, si looga caawiyo hawshan adag, aad ugu kalsoonaan lahayd dhiirrigelinta ciyaar xiiso iyo xamaasad weyn leh? Waxay ku saabsan tahay Scribble, erey erey Mareykan ah, oo la sameeyay 1930-kii wixii markaa ka dambeeyayna loo tarjumay 22 luqadood.
Scribble: sida loo ciyaaro talaabo talaabo?
In la ciyaaro backgammon khadka tooska ah ee bilaashka ah, kaliya raac tilmaamahan tallaabo-tallaabada ah :
1 Step . Fur biraawsarkaaga aad doorbidayso oo aad tagto bogga ciyaarta emulator.online.
2 Step . Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u gasho websaydhka, ciyaarta ayaa mar hore lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Waa inaad doorataa magac si aad ubilaawdo ciyaarta. Haddii aad rabto, waxaad sidoo kale dooran kartaa sawir. Guji " Ciyaar " oo waxaad bilaabi kartaa ciyaar, dooro inaad la ciyaarto mashiinka ama la ciyaar hal ama in ka badan saaxiibo.
Tallaabada 3. Waa kuwan badhamno waxtar leh. Waad awoodaa Ku dar ama ka saar codka ", taabo" Play "badhanka oo bilow ciyaarta, waad awoodaa" Haki "Iyo" Dib u bilow "xili walba.
Tallaabada 4. Si aad ugu guuleysato ciyaarta waa inaad ereyo ku sameysid sabuuradda. Xaraf kastaa wuxuu leeyahay dhibco . Qofkii dhibcaha ugu badan hela dhamaadka ciyaarta ayaa guuleysan doona.
Waa maxay Scribble?
Scribble waa ciyaar guddi ay ciyaartoydeeda (2-4) isku dayaan inay ku daraan dhibco iyagoo sameysmaya ereyo isku xidhan , adoo adeegsanaya dhagxaanta warqadaha sabuuradda loo qaybiyay 225 laba jibbaaran .
Dad badan ayaa aamminsan in alifleyda 'Scribble' ay yihiin James brunot iyo Helen Brunot , laakiin dhab ahaantii ma ahayn fikradooda, ee taa waa taas ninkii alifay Scribble waa Alfred Butts , naqshadeeye ka socda Poughkeepsie, oo ku yaal Gobolka New York.
Sanadkii wuxuu ahaa 1931 , iyo sida kuwa badan oo shaqo laawayaal ah, Butts waxay hayeen waqti badan oo ay ku dhaafaan. Wuxuu go’aansaday inuu la yimaado ciyaar cusub oo qayb ahaan ku tiirsanayd nasiibka qaybna xirfadda.
Alfred Mosher Butts, wuxuu akhriyay boggaga hore ee joornaalka New York Times si uu u xisaabiyo inta jeer ee waraaqo gaar ah lagu bixiyo luuqada Ingiriiska (laakiin wuxuu yareeyay dhacdooyinka "S" si ciyaarta aysan u noqon mid aad u fudud), iyo la siiyay qiimo mid kasta oo ku saleysan naadirnimadiisa.
Loor looma baahneyn tan iyo markii alwaaxda loo habeeyay iyadoo la raacayo qorshaha ereyga gudbinta. Wuxuu u bixiyay kulankaan magaca Lexicon .
Codsigiisa patent-ka lama aqbalin, ciyaartooyadu ma xiiseyneynin, sidaa darteed 1938, wuxuu wax ka beddelay ciyaarta isagoo ku daray a 15 x 15 loox oo leh laba jibbaarana dhibco badan iyo a toddobo-taayil muxaadaro (muuqaalo wali harsan). .
Sidoo kale wuxuu u badalay magaca Criss-Crosswords , laakiin markale Xafiiska Patent-ka ciyaartooydana ma rabin inay wax ogaadaan. Markuu xoogaa dhammaystay, wuxuu ku noqday shaqadiisii ​​hore ee naqshadaha.
1948, James Brunot , oo ah milkiilaha mid ka mid ah ciyaaraha yar, ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu isku dayo inuu si guul leh u suuq geeyo. Beddelka xuquuqda daabacaadda, Brunot wuxuu helay xuquuqda lahaanshaha .
Waxaan dib uqaybiyay afargeesyada abaalmarinta, fududeeyay xeerarka, iyo magaca u badalay dhadheer , taas oo waxaa lagu calaamadeeyay isla sanadkaas 1948 iyo Ingriiska 1953 .
Ka shaqaynta guriga, wuxuu iibiyey in ka badan 2,000 oo ciyaarood 1949. Sannadkii 1952 ayaa hadalku soo baxay iibkuna wuxuu bilaabay inuu fuulo, isla markii uu Brunot doonayey inuu ku tuuro tuwaalka.
Jack Strauss, oo maamule ka ah Bakhaarka weyn ee Macy, ayaa ciyaaray intii uu fasaxa ku jiray. Markii uu soo noqday wuxuu ka codsaday waaxdiisa ciyaaraha inay u soo dirto qaar ka mid ah, laakiin ma jirin wax kayd ah.
Macy wuxuu bilaabay inuu taageero dadaalada xayeysiinta, maxaa yeelay Brunot wuxuu la socon waayey iibka kordhay, wuxuu shati u siiyay wax soosaarka Selchow & Righter . Xuquuqda ka baxsan Mareykanka, Kanada iyo Australia waxaa laga iibiyay JW Spears, oo ah shirkad Ingiriis ah. Codsigii ugu horreeyay ee British-ka ah ee patent-ka waxaa la sameeyay oo keliya 1954.
Noocyo kaladuwan ayaa looga baahan yahay luqado kala duwan tan iyo inta xarfaha iyo xitaa xarfaha laftoodu way kala duwanaan karaan (tusaale ahaan, Isbaanishku wuxuu leeyahay xarfaha LL iyo CH). In ka badan 100 milyan oo ciyaaro ayaa lagu iibiyay 29 luqadood. James Brunot wuxuu dhintay 1984 iyo Alfred Butts 1993.
Shuruucdu had iyo jeer waxay ku xirnaan doonaan cidda aad la ciyaareyso runtiina weligood si buuxda looma fulin doono.
dhadheer waxaa ciyaari kara lambar u dhexeeya labo ilaa afar ciyaartoy .
Waxaa jira loox laba jibbaaran oo leh 15 afar geesood oo dhinaca ah.
Mid walbana wuxuu xaq u yeelan doonaa toddobo xaraf wareeg kasta.
Cayaartu waxay bilaabmaysaa haddii aad qaadato warqadda ugu dhow A ama A.
Xaraf kastaa wuxuu leeyahay lambar leh qiimaha u dhigma.
Looxdu waxay ka kooban tahay laba jibbaarane oo isbiirsada qiimaha xarfaha ama ereyada, haddii xarafka ama eraygu uu ka bato qiimahaas. Qiyamyadani waa la labanlaabi karaa ama labanlaabi karaa.
Haddii ciyaaryahan u sameysan karo eray asaga oo adeegsanaya toddobada xaraf ee gacantiisa ku jira, isagu si toos ah u dhalinaya 50 dhibcood .
Scribble, maahan oo keliya dhisida ereyada, istiraatiijiyaddu waa in lagu ururiyo dhibco xarfo wanaagsan iyo fagaarayaal wanaagsan.
Kadib dhaqaaqa ugu horeeya, ciyaartoydu waa inay adeegsadaan ugu yaraan hal xaraf oo horey ugu jiray guddiga ciyaarta.
Cayaartu waxay dhamaanaysaa marka xarfaha ciyaartu dhamaadaan oo dhamaan ciyaartoydu waxay sameeyeen dhaqaaqoodii ugu dambeeyay. Dhibcaha uu ciyaartoy kasta ku sii jiro gacanta waxaa laga jarayaa wadartooda.
Waxyaabaha xiisaha leh
• Haddii dhammaan qaybaha kala duwen ee loo yaqaan 'Scribble' oo la soo saaray ilaa maanta la is dhinac dhigo, waxaa suurtogal ah in la sameeyo khad isdaba-joog ah oo awood u leh inuu ku wareego dhulka siddeed jeer.
• Laba askari ayaa ku xannibmay jiingad ku taal Antarctica sannaddii 1985. Waxay si joogto ah u ciyaarayeen Scribble 5 maalmood, ilaa laga soo badbaadiyey.
• Tirakoobyadu waxay yiraahdaan 30,000 oo Ciyaaraha Scribble ah ayaa la bilaabay saacad kasta oo dhaafta
• Luqadda ugu dambeysa ee lagu soo saaray Scrabbrle waa Welsh, oo nuqulkeeda la soo saaray 2006.
• Waxaa lagu qiyaasaa inay jiraan ugu yaraan hal milyan oo gogo 'ciyaar lumis ah oo ku baahsan adduunka.
• 1993, Qaamuuska rasmiga ee Scribble ee Waqooyiga Ameerika ayaa mamnuucay dhamaan cayda iyo cayda midab takoorka.